Mogadishu Journal » Ciidamada Dowladda oo soo bandhigay sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab
Mjournal :-Saraakiisha Ciidamada Dowladda ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay faah faahin kabixiyeen howlgal ay siwadajir ah u fuliyeen Ciidamada Dowladda iyo kuwa Jubbaland ay kusoo qabteen sida ay sheegeen sargaal katirsanaa Ururka Al-Shabaab.
Sargaal katirsan Ciidamada Dowladda ee kusugan gobalkaasi Jubbada hoose oo lahadlay Warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ay soo qabteen Sarkaal muddo tobansano ah ka tirsanaa Al-Shabaab.
Waxa uu sheegay in sargaalkaas ay qabteeen uu qayb ka ahaa dagaalkii ay Al-Shabaab ku qaadeen Ciidamada Kenya ee ku sugan deegaanka Ceel-Cadde ee Gobolka Gedo,waxaana Magaciisa lagu sheegay sarkaalkaas Ibraahim lujeende Maxamed.
Waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in Sarkaalka ay qabteen uu Al-Shabaab u qaabilsanaa Arimaha xograadinta ,hayeeshee uu iminka gacantooda soo galay.
Marka laga soot ago warkaan kasoo baxay saraakiisha Ciidamada Dowladda ee Gobolka Jubbada Hoose majiraan dhankooda wax war ah oo kazoo baxay Al-Shabaab.
Xukuumadda Somalia oo amar kasoo saartay qashin lagu shubo garoonka Aadan-Cadde